DTG overprint marika avy amin'ny sombin-javatra iray - P&M KAOMPIASA TRUTERA → Akanjo fampiroboroboana • Akanjo fiasana
Fanontana DTG, fanamarihana amin'ny sombin-javatra iray
Fanontana DTG - mety ho fanontana avy amin'ny sombin-javatra iray
Ny fanontana DTG dia iray amin'ireo fomba vaovao fanamarihana akanjo sy kojakoja. Ny teknikan'ny DTG dia ahafahanao mampiditra sary amin'ny lamba landihazo na landihazo miaraka amina elastane / viscose. Namboarina tamin'ny fampiasana mpanonta manokana ny sary. Ny fitaovana ananantsika ao amin'ny vatan'ny masininay no maodely mpanonta farany Rahalahy GTXpro Bulkizay, misaotra ireo lohan'ny indostria, dia manonta haingana ireo fitaovana ireo. Ny fanontana DTG dia mamela fandikana loko tonga lafatra miaraka amin'ny tetezamita loko. Ny fanontana dia azo atao raha tsy mila manomana tetikasa avy amin'ny singany iray monja.
Saron-dandihazo vita amin'ny landihazo, habe vehivavy sy lehilahy miaraka amin'ny mety hisian'ny fanontana na logo an'ny orinasa
Fanontana amin'ny sarontava sy kojakoja mampiasa ny fomba DTG misy logo ho an'ny mpiasa
Ny faharetan'ny fanontana DTG dia miankina amin'ny singa maromaro. Voalohany indrindra, ny maodely sy ny masontsivana - ny vaovao no fitaovana, vao mainka kalitao tsara kokoa ary vokatra. Antony hafa misy fiantraikany amin'ny faharetana ny karazan-doko ampiasaina, ny lamba anaovana ny fanontana sy ny fahaizan'ny mpiasa.
Ny mpanonta ny Rahalahy GTXpro Bulk antsika dia ahafahana manao izany pirinty amin'ny refy 40,6 sm x 53,3 cm lehibe indrindra. Noho ny fihenan'ny vidiny sy ny fotoana fikojakojana azy dia azo atao ny manomana ny masinina amin'ny fanontana haingana sy mampihena ny isan'ny fanelingelenana amin'ny asa. Ny haavon'ny loha mety dia tsy mampiato ny fizotran'ny fanontana rehefa manakaiky ny lohany ny mpamatsy, fa mora tohina koa amin'ny halavirana lehibe eo anelanelan'ny loha sy ny mpamatsy, izay manome antoka hatrany ny kalitaon'ny fanontana avo lenta. Ny lohan'ny ranomainty fotsy vaovao sy nohatsaraina miaraka amina isa mitombo dia manome mode printy 10% haingana kokoa. Io kosa dia adika amin'ny fotoana fanodinana filaminana fohy kokoa ho an'ny mpanjifa.
DTG pirinty mety amin'ny fanamarihana maridrefy sy fanontana voafetra
Ny mpanonta DTXpro Bulk vaovao dia maodely miovaova sy tena mahomby. Manolotra fahaiza-manao famokarana betsaka izy io, mahatonga azy io ho tonga lafatra amin'ny fanatanterahana ny filaharana.
Fivarotana sy zokiolona: GTXpro dia vahaolana mety indrindra amin'ny fanomanana karazana trano fivarotana, masoivohon'ny dokambarotra, andrim-panjakana, klioba ary toeram-piasana. Ny teknolojia DTG dia malefaka sy matevina. Misaotra an'io, azonao atao ny manitatra ny trano fitahirizanao amina vokatra manokana toa ny T-shirts ho an'ny olona rehetra manana ny anarany, manana ny toerany, kitapo dokam-barotraary na dia kiraro miaraka amin'ny kantonao aza. Personalization aleony ny famantarana ny mpampiasa amin'ny marika, izay misy akony eo aminy ny sary tsara sy ny fitokisana mitombo.
Ny pirinty amin'ny T-shirt mampiasa ny fomba DTG dia azo alaina avy amin'ny ampahany iray
HEVITRA HO AN'NY FIVORIANA GROUP SY INDIVIDU: Krismasy, paska, jobily, fahombiazana matihanina, Fetin'ny reny na Andron'ny ankizy no fotoana be mpitia indrindra hanomanana fanomezana indraindray. Arakaraka ny maha-izy azy manokana, manokana azy manokana indraindray - no mahatsara ny fahatsapana sy toerana matanjaka kokoa. Fanomezana ho an'ny mpiasa ho an'ny mpiasa na fanomezana Jobily toy ny loka amin'ny fifaninanana fotoana lehibe ahazoana manafana ny sary. Ho setrin'izany, ny fanomezana, indrindra ireo azo ampiharina, toy ny lamba famaohana ho an'ny faha-20 taonan'ny orinasan'ny orinasa na miaraka amin'ny mariky ny loka voaray ho an'ny orinasa, dia ho fitaovana lehibe ho an'ny mpiara-miasa sy ny mpanjifa mety for manasongadina ny toeran'ny orinasa manohitra ny fifaninanana.
Ho setrin'izany, ny fahafahan'ny fanontana amin'ny sombin-javatra iray dia manokatra safidy hanomanana fanomezana am-boalohany ho an'ny olona manokana amin'ny andro manokana. Ny tatitra manokana nomen'ny olona iray fanomezam-pahasoavana noforonina tamin'ny fandraisana anjaran'ny tena manokana, ary ny kalitao avo lenta, dia hamela fahatsiarovana mahafinaritra mandritra ny taona maro. Ny GTXpro dia mamela anao hijanona ho malefaka amin'ny famokarana, manome antsika fotoana hihetsika haingana sy ara-toekarena amin'ny fanovana ny baiko.
Ny fanontana DTG dia tsy mitaky fanomanana tetikasa, izay iray amin'ireo tombony lehibe (toa ny fanontana amin'ny efijery na amboradain'ny solosaina). Ny fanatanterahana azy dia azo atao mivantana avy amin'ny rakitra an'ny mpanjifa, izay tsy maintsy ahitsy mifanaraka amin'izany. Azo atao ny manonta avy amin'ny singany iray, izay ahafahanao manao azy fanontana fanandramana alohan'ny hanaovana habetsahana lehibe kokoa. koa manonta sary azo atao izany, fa zava-dehibe ny hahitana azy amin'ny vahaolana avo indrindra azo atao.
FAHARETANA: Tombony lehibe io mateza avoraha vita amin'ny fitaovana matihanina izy io. Ny fampiasana fanatsarana vaovao ho an'ny asa ara-toekarena bebe kokoa dia mamela somary ambany ny vidin'ny fanontana. Ny akora dia tokony ho landihazo na miaraka amina fangaro viscose, na elastane, saingy zava-dehibe ny tsy ahinjitra loatra.
Ny fanarahana ny tolo-kevitr'ireo mpanamboatra dia ahafahantsika mankafy ny vokatry ny tetikasanay mandritra ny fotoana maharitra.
Saron-tava vita amin'ny landihazo misy pirinty logo DTG
Fanontana DTGfanontana amin'ny T-shirtfanontana amin'ny fitafiana MasovianaFanontana Rawa Mazowieckafanaovana pirinty amin'ny akanjo misy ny sary famantarana DTGfanontana amin'ny patalohaDTG Poloninafanomezana manokanaT-shirt fanomezanaT-shirt misy ny marika Mszczonówt-shirt misy soratratee-shirt misy saryho fanomezanaDTG overprintoverprint DTG Mazowieckiepirinty LodzFanontana logo Rawapirinty misy soratra hoe Lodzmanisy tombo-kase amin'ny kojakojapirinty amin'ny akanjo bapirinty amin'ny satrokafanontana amin'ny akanjo ho an'ny mpiasafanontana avy amin'ny sombin-javatra iraySarin'i Warsawimprint Wroclawpirinty amin'ny T-shirt Katowiceloka miaraka amin'ny logo ho an'ny fifaninanananaruk amin'ny kitapoakanjo ho an'ny mpiasa ao Strykówakanjo miaraka amin'ny pirinty Niepołomiceakanjo misy marika DTG StrykówAkanjo marika Niepołomicehevitrafanomezana ho an'ny mpiasafanomezana manokanafanomezana miaraka amin'ny sary famantaranafanomezana miaraka amin'ny saryakanjo ho an'ny mpiasaakanjo ho an'ny trano fanatobiana entana misy pirintyFanamarihana DTGfanamarihana ny akanjo any Łódź